Amabali EBhayibhile: UMordekayi NoEstere - IWebhsayithi Esemthethweni YamaNgqina KaYehova
MAKHE sibuyele umva kwiminyaka embalwa ngaphambi kokuba uEzra aye eYerusalem. UMordekayi noEstere ngamaSirayeli adume kunene ebukumkanini basePersi. UEstere ngukumkanikazi yaye umza wakhe uMordekayi nguye kuphela olandela ukumkani ngegunya. Masibone ukuba kwenzeka njani oku.
Abazali bakaEstere bafa esemncinane gqitha, waza wakhuliswa nguMordekayi. UAhaswerosi, ukumkani wasePersi, unebhotwe kwisixeko saseShushan, yaye uMordekayi ngomnye wabakhonzi bakhe. Ngamhla uthile inkosikazi yokumkani uVashti ayizange imthobele, ngoko ukumkani wakhetha umfazi omtsha njengokumkanikazi. Uyamazi na umfazi amnyulayo? Ewe, nguEstere omhle oselula.
Uyayibona na le ndoda inekratshi baqubuda kuyo abantu? NguHaman lo. Ngumntu odume kakhulu ePersi. UHaman ufuna ukuba uMordekayi, ombonayo apha ehleli phantsi, naye aqubude kuye. Kodwa uMordekayi akanakuyenza loo nto. Akakucingi njengento efanelekileyo ukuqubuda kumntu ongendawo ngolo hlobo. Le nto imcaphukisa kunene uHaman. Nantsi ke into ayenzayo.
UHaman uyaxoka kukumkani ngamaSirayeli. ‘Bangabantu ababi abangayithobeliyo imithetho yakho,’ utsho. ‘Mababulawe.’ UAhaswerosi akazi ukuba umkakhe uEstere ngumSirayelikazi. Ngoko uyamphulaphula uHaman, aze awise umthetho wokuba ngomhla othile onke amaSirayeli makabulawe.
Ekuveni kukaMordekayi ngalo mthetho, uphazamiseka gqitha. Uthumela udaba kuEstere oluthi: ‘Mxelele ukumkani, uze umbongoze asisindise.’ Kuchasene nomthetho wasePersi ukubona ukumkani ngaphandle kokuba umenyiwe. Kodwa uEstere uya kuye engamenywanga. Ukumkani umalatha ngentonga yakhe yegolide, okuthetha ukuba makangabulawa. UEstere umemela ukumkani noHaman esidlweni esikhulu. Apho ukumkani ubuza uEstere into angambabala ngayo. UEstere uthi uza kumxelela ukuba yena noHaman baza kuza kwesinye isidlo ngengomso.
Kweso sidlo uEstere uthi kukumkani: ‘Mna nabantu bakowethu siza kubulawa.’ Ukumkani uba nomsindo. ‘Ngubani na lowo uzimisele ukwenza le nto?’ uyabuza.
‘Indoda elutshaba ngulo Haman ungendawo!’ utsho uEstere.
Ngoku ukumkani uyabhavuma ngumsindo. Uyalela ukuba uHaman abulawe. Kamva, ukumkani wenza uMordekayi abe ngoyena unegunya ukulandela yena. Ngoko uMordekayi ulungiselela ukuba kwenziwe umthetho omtsha ovumela amaSirayeli ukulwela ubomi bawo ngomhla amele ukubulawa ngawo. Kuba uMordekayi edume kangako ngoku, abantu abaninzi bayawanceda amaSirayeli, aze asindiswe kwiintshaba zawo.
lncwadi yeBhayibhile kaEstere.
Ngubani uMordekayi noEstere?
Kutheni uKumkani uAhaswerosi efuna umfazi omtsha, yaye ukhetha bani?
Ngubani uHaman, yaye yintoni ebangela ukuba abe nomsindo?
Nguwuphi umthetho omiselwayo, yaye wenza ntoni uEstere emva kokuba efumene umyalezo ovela kuMordekayi?
Kwenzeka ntoni kuHaman nakuMordekayi?
AmaSirayeli asindiswa njani kwiintshaba zawo?
Funda uEstere 2:12-18.
UEstere wakubonisa njani ukubaluleka kokuhlakulela ‘umoya ozolileyo nowobulali’? (Est. 2:15; 1 Pet. 3:1-5)
Funda uEstere 4:1-17.
Kanye njengokuba uEstere wanikwa ithuba lokumela unqulo lokwenyaniso, liliphi ithuba esilinikiweyo thina lokubonakalisa ukuzinikela nokuthembeka kwethu kuYehova? (Est. 4:13, 14; Mat. 5:14-16; 24:14)
Funda uEstere 7:1-6.
Bangakanani abantu bakaThixo namhlanje abaye bazibeka esichengeni sokutshutshiswa kanye njengokuba wenzayo uEstere? (Est. 7:4; Mat. 10:16-22; 1 Pet. 2:12)
Ikhadi LeBhayibhile LikaEstere
Ukuba nesibindi kukaEstere kwabasindisa njani abantu? Printa eli khadi leBhayibhile uze ufunde kwindlela awazenza ngayo izinto.